छैन त लामो पहिले को जीवन मा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता सामेल एक सामाजिक सञ्जाल हो । तिनीहरूलाई केही प्राप्त गरेका छन् असाधारण लोकप्रियता, धेरै बाँकी छ, अज्ञात छ ।, धारा — तिनीहरूलाई सबै भए धेरै प्रसिद्ध ल्याउन र आफ्नो रचनाकार लाखौं को मुनाफा ।
विचार को सामाजिक सञ्जाल सरल छ — दिन मानिसहरू कुराकानी गर्न मौका, को लागि खोज पूर्व मित्र र धारा र साधारण रमाइलो समय खर्च छ । त्यसैले, सृष्टिको यसको आफ्नै सामाजिक नेटवर्क — एक होनहार व्यापार विचार ल्याउन सक्छ कि धेरै राजस्व विषय यसको उचित कार्यान्वयन हो । यदि तपाईं विचार संग आए सुरु गर्न व्यापार को यस प्रकारको व्यावहारिक मूल्याङकन गर्नु आफ्नै बल.
पनि छ भने तपाईं एक राम्रो अनुभव वेबमास्टर, छैन बाहिर राख्नु संग प्रतिस्पर्धा गर्न बढुवा परियोजनाहरू । तपाईं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ तेस्रो-पक्ष विशेषज्ञहरु — आफ्नो निवेश । सफल गर्न सजिलो छैन, र गर्न सक्छन् असफल धेरै सजिलै संग रूपमा, यो भयो, धेरै संग.
त्यसैले, सिर्जना गर्न एक लोकप्रिय र लाभदायक सामाजिक नेटवर्क, तपाईं आवश्यक एक शक्तिशाली लगानी, व्यावसायिक, बजार पदोन्नति, को उपलब्धता व्यापार कनेक्शन
त्यसैले, भर गर्न आवश्यक छ, एक अत्यधिक विशेष नेटवर्क, लागि संयोजन प्रयोगकर्ता चासो छ । यो साँघुरो को बजार प्रतियोगिता नगण्य छ । उदाहरणका लागि, एक परियोजना लागि कुकुर, बिल्ली प्रेमीहरूले लागि, खेलाडी परीक्षक वा चेस बासिन्दा लागि, एक सानो शहर र पनि प्रेम लागि राम्रो भोजन हो । विकल्प धेरै छन्, मुख्य कुरा हो — जो अनुमान गर्न तिनीहरूलाई हुन सक्छ चासो को संभावित प्रयोगकर्ता, र निर्धारण गर्न को स्तर मा प्रतिस्पर्धा गर्न सही गणना मा सेना लागि सङ्घर्ष.
आदर्श विकल्प छ लागि प्रतियोगिहरु थियो, त्यसपछि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल आवश्यकता छैन धेरै सेना र साधन को लागि विकास ।
याद गर्नुहोस् कि प्रयोगकर्ता आफूलाई देखा छैन
तिनीहरूलाई आकर्षित गर्न, भरण नेटवर्क गुणवत्ता संग र रोचक सामग्री चित्र, अडियो र भिडियो. सुरु देखि आफ्नो नाम धेरै खाता सिर्जना, ब्लग र रेकर्ड आफ्नो काल्पनिक आगंतुकों, जो बीचमा हुनुपर्छ सुन्दर महिला र बलियो मानिसहरू । आफ्नो प्रोफाइल फोटो संग र मुद्रण लेख को मुख्य पृष्ठमा आफ्नो नेटवर्क । तिनीहरूले हुनेछ, अनुहार को आफ्नो परियोजना, को छाप बनाउन यसको लोकप्रियता र आकर्षण पैदा हुनेछ, एक इच्छा दर्ता गर्न र कुराकानी भएको छ । विकास विभिन्न बोनस र लाभ लागि भर्खरै दर्ता मान्छे ।
प्रशिक्षित गर्न अग्रिम मा बजार र पदोन्नति प्रयास, पूरा गर्न आफ्नो विषय पृष्ठ कुरा नै अस्तित्वहीन र राम्रो-ज्ञात सामाजिक नेटवर्क । मात्र हुनेछ यस दिन तपाईं अमूल्य अनुभव मा आकर्षित गर्न आगंतुकों. यदि तपाईं व्यवस्थापन गर्न रंगरुट को एक ठूलो संख्या ग्राहकहरु वा समूह सदस्यहरू प्राप्त गर्न राम्रो पैसा । धन्यवाद प्राप्त अनुभव र यसरी कमाएको धन, तपाईं गम्भीर वृद्धि संभावना सिर्जना गर्न आफ्नो नेटवर्क, यो संग मदत पेशेवरों.
भुल्ने छैन कि कुनै पनि सामाजिक नेटवर्क को लागि महत्वपूर्ण छ, यसको कार्यक्षमता । एक आगन्तुक आफ्नो खाता सिर्जना गर्न सक्षम हुनुपर्ने एक भर्चुअल कार्यालय, पोस्ट फोटो, संगीत र भिडियो लेखन, आफ्नो ब्लग वा डायरी । तपाईं पनि गर्नुपर्छ छैन मा डिजाइन र लेआउट को मुख्य. लागि यो निश्चित छ ल्याउन सबैभन्दा रोचक र लोकप्रिय पोष्ट, तस्बिरहरू, भिडियो र लेख को विषय मा परियोजना ।
जब आफ्नो सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ केही लोकप्रियता, तपाईं प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ राजस्व देखि विज्ञापन देखि, विज्ञापन र प्रासङ्गिक साझेदार । राम्रो मुनाफा ल्याउनेछ साझेदारी गर्न स्रोतको एक किसिम प्रदान, भुक्तानी पहुँच डाउनलोड विभिन्न सामग्री । एक सिस्टम विकास को भुक्तानी लागि कार्य को खाता यसको प्रयोगकर्ता । सम्झना: को सफलता यस्तो एक परियोजना मा लगातार विस्तार र विकास को सामाजिक नेटवर्क ।
← भिडियो डेटिङ रूसी भिडियो च्याट सभा (फ्रान्स)
भिडियो च्याट डेटिङ →